Ukusebenzisa i-Google Drayivu - Izici Ezintsha, Izinzuzo Zesitoreji se-Google Amafu
Iya ku-Google Drayivu
Landa okwe-Android Landa okwe-iOS Ngena Ngemvume
Hlola Izici Zesitoreji se-IDrayivu
Izinto zakho, ngendlela yakho - Izici ze-Drayivu
Gcina noma yiliphi ifayela
Yabelana ngendlela ofuna ngayo
Isikhala esingu-15GB Gcina noma yiliphi ifayela Yabelana ngendlela ofuna ngayo Okuphephile nokuvikelekile
Isitoreji sakho sisebenza neDrayivu, i-Gmail kanye Nezithombe ze-Google, ukuze ukwazi ukugcina amafayela, ulondoloze izinanyathiselwa ze-imeyili futhi wenze isipele sezithombe ngokuqondile kuDrayivu. Ungakwazi futhi ukuthenga uhlelo lwesitoreji sefu esikhulu ngokwesidingo sakho.
Izithombe, amavidiyo, amaphrezentheshini, ama-PDF – ngisho namafayela e-Microsoft Office. Kungakhathaliseki ukuthi uhlobo olunjani lwefayela, yonke into ingagcinwa ngokuphephile kuDrayivu.
Amafayela akuDrayivu ayimfihlo, kuze kube yilapho unquma ukwabelana ngawo. Ungakwazi ukumema abanye ukuthi babuke, babeke amazwana, futhi bahlele noma yiliphi ifayela noma ifolda oyikhethayo. Ukuhlanganyela ku-inthanethi okwenziwe lula.
Ukuvikeleka kwefayela lakho kubalulekile. Yingakho lonke ifayela kuDrayivu lihlala liphephile kungakhathaliseki ukuthi yini eyenzekayo ku-smartphone yakho, ithebhulethi noma ikhompyutha. IDrayivu ibethelwa kusetshenziswa i-SSL, iphrothokholi yokuvikeleka efanayo esetshenziswa ku-Gmail namanye amasevisi e-Google.
Yakhelwe ukusebenza ne-Google
Londoloza okunamathiselwe kwe-Gmail
Londoloza okunamathiselwe kwe-Gmail Ukusesha okunamandla Izithombe ze-Google Ama-Chromebook
Hamba phezu kwesinamathiselwa ku-Gmail futhi ubheke ilogo yeDrayivu. Lapha, ungakwazi ukulondoloza noma yikuphi okunamathiselwe kuDrayivu yakho ukuze uhlele futhi wabelane ngakho endaweni eyodwa, ephephile.
IDrayivu ikwazi ukubona izinto ezithombeni zakho nemibhalo kumadokhumenti askeniwe. Ngakho ungasesha igama elifana nelithi “Eiffel Tower” futhi uthole amadokhumenti ombhalo analelo gama, kanye nezithombe ze-Eiffel Tower engokoqobo.
Gcina izithombe zakho kuDrayivu futhi uzibone ziphila Ngezithombe ze-Google. Thola ukubukeka okuhlelwe ngobuchwepheshe ngaphandle komzamo otheni, kanye nopopayi, amamuvi, nokuningi.
I-Google Drayivu yakhelwe kuma-Chromebook, ngakho amafayela nezithombe zakho zenzelwa isipele ngokuzenzakalelayo. Uzothola u-100GB wesitoreji samahhala iminyaka emibili ngama-Chromebook amasha amaningi.
Sebenza ngendlela ehlakaniphile ngezinhlelo zokusebenza
Amadokhumenti, AmaSpredishithi, Amaslayidi
Izinhlelo Zokusebenza Ze-Drayivu Eziningi
Amadokhumenti, AmaSpredishithi, Amaslayidi Amafomu we-Google Google Imidwebo Izinhlelo Zokusebenza Ze-Drayivu Eziningi
Dala futhi hlanganyela nabanye. Yabelana ngamadokhumenti namafayela, yakha amaspredishithi futhi wakhe amaphrezentheshini emoyeni ngezinhlelo zethu zokusebenza ezithi Amadokhumenti, AmaSpredishithi nezithi Amaslayidi .
I-Google Amafomu ikuvumela ukuthi wenze inhlolovo noma wakhe ngokushesha irosta yethimba ngefomu le-inthanethi elilula. Bese uhlola imiphumela, ehlelwe ngokucophelela kusipredishithi.
Ndlala imidwebo, dala amashadi agelezayo, bese uwengeza kalula kwamanye amadokhumenti noma uwashumeke kuwebhusayithi nge-Google Imidwebo.
Hlela isithombe sakho sephrofayili, yenza ukwakheka kwezwe, dala imephu yengqondo nokunye okwengeziwe. Izinhlelo zokusebenza zeDrayivu ezingaphezu kuka-100 zingakusiza ukuthi wenze okwengeziwe ngezinto zakho. Zizame ngokufaka usuka kwelilodwa lamaqoqo eDrayivu Esitolo Sewebhu Se-Chrome.
Thatha IDrayivu kude nakakhulu
Sebenza ungaxhunyiwe ku-intanethi
Bona izinguqulo ezindala
Skena amadokhumenti Sebenza ungaxhunyiwe ku-intanethi Bona izinguqulo ezindala
Skena wonke amadokhumenti akho amaphepha ngeDrayivu ye-Android. Vele uthathe isithombe samadokhumenti afana namarisithi, izincwadi nezitatimende – futhi IDrayivu izowagcina ngokushesha njengama-PDF.
Yenza amafayela atholakale ungaxhunyiwe ku-intanethi ukuze ukwazi ukuwabuka ngesikhathi ifoni noma ithebulethi yakho ilahlekelwa isevisi, njengasendizeni noma esakhiweni esinokuxhumana okungekuhle.
Ungakwazi ukubheka emuva kuze kufike ezinsukwini ezingu-30 ezinhlotsheni eziningi zamafayela, okukwenza kube lula ukubona ukuthi ubani owenze izinguquko futhi ubuyele emuva kuzinguqulo zangaphambilini. Lokho ukwenziwa kwenguqulo yefayela okwenziwe lula.
Yabelana ngesayithi ye-Izinhlelo zokusebenza ze-Google:
Sikwethulela i-Google Drayivu
Izinhlelo kanye Namanani
Buka / Thuthukisa Uhlelo Lesitoreji
Isikhungo Sosizo se-Drayivu
Iforamu Yosizo ye-Google Drayivu
I-Google Drive for Work
Iplathifomu Ye-Google Amafu
I-Google Apps yeMfundo
Shintsha ulimi: Afrikaans العربية azərbaycan dili български বাংলা català čeština dansk Deutsch Ελληνικά English (United States) English (United Kingdom) español (Latinoamérica) español eesti euskara فارسی suomi Filipino français français (Canada) galego ગુજરાતી हिन्दी עברית hrvatski magyar հայերեն Indonesia íslenska italiano 日本語 ქართული ខ្មែរ ಕನ್ನಡ 한국어 ລາວ lietuvių latviešu മലയാളം монгол मराठी Bahasa Melayu नेपाली Nederlands norsk bokmål ਪੰਜਾਬੀ polski português (Brasil) português (Portugal) română русский සිංහල slovenčina slovenščina српски svenska Kiswahili தமிழ் తెలుగు ไทย Türkçe українська اردو Tiếng Việt 中文 (简体, 中国) 中文 (繁體字, 中華人民共和國香港特別行政區) 中文 (繁體, 台灣) isiZulu